Nagu saabsan - Shanghai Ziling Baako Co., Ltd.
Safka kuleylka kuleylka
Si Fudud Loo Fiiqay
Cadaadis Khatimidii Xasaasi ah
Shanghai Ziling Baako Co., Ltd.
Shirkadda Shanghai Ziling Packaging Co., Ltd. waa mid ka mid ah hoggaamiyeyaasha Waxsoosaarayaasha Shirkadda Cap Seal Liners ee Shiinaha, oo la aasaasay 1990-meeyadii, waxay ku takhasustay soo saarista aluminium xirashada xargaha, muraayadaha safka dhalada, Xakamaynta xasaasiga ah ee cadaadiska, EVA Foam liners, EPE Foam liners , Daahida silsiladaha shaabadaynta, iwm.
Alaabtayada ayaa si ballaaran loo heli karaa si ay u xirxiraan Daawooyinka, Cuntooyinka, Cosmetics, Lubricant, Pesticides, iwm. Iyadoo ay la socdaan howlaha sare ee ka hortagga daadashada iyo qoyaanka, anti-been abuurka, iyo kordhinta muddada keydinta alaabada.
Shirkaddayadu waxay ku taalaa 601, Laolu Road, Degmada Pudong New, Shanghai. Warshaddeennu waxay ku dhowdahay dekedda Yangshan iyo garoonka diyaaradaha ee Pudong. Gaadiidkeenu waa mid aad u habboon.
Waxaan si joogto ah ugu adkeysan doonnaa hal-abuurnimada, oo waxaan la ganacsan doonnaa shirkadaha gudaha iyo dibaddaba ku saleysan sinnaan iyo faa'iido wadaag, u heellan bixinta alaab iyo adeegyo tayo sare leh.
Shirkaddayadu waxay leedahay wax ka badan 10 sano oo khibrad u leh tikniyoolajiyadda wax soo saarka. Iyadoo la adeegsanayo cilmi baaris farsamo iyo horumarin, isla markaana si joogto ah loo horumariyo loona hagaajiyo alaabada, heerkeena tiknoolajiyadeed iyo had iyo jeer isla warshadaha ayaa ku jira booska hogaaminta.
Maamulka shirkadeenu wuxuu ku saleysan yahay GMP, waxaan sameynay xarun wax soo saar iyo ilaalin tayo leh, (xakameynta tayada xirfadeed, baaritaanka tayada iyo baaritaanka), shirkadu waxay leedahay jir iyo kiimiko, iyo qabashada (10,000) Sheybaar ee alaabta ceeriin , tijaabinta wax soo saarka iyo tijaabinta.
La aasaasay 1990, ka dib in ka badan toban sano oo dadaal ah, shirkadeena waxay horeyba u leedahay dhaqan shirkadeed u gaar ah. Sannadkii 2006, waxaan ku samaynaynaa isbeddel dhammaystiran geedka u eg-beerta, aagga cagaaran hadda 50 boqolkiiba.
Naadiga ay bixiyeen shirkadda iyo shaqaaluhu, qolka akhriska, iyo shaqaalaha kale, waxay u maqnaayeen nasasho, madadaalo, aqoon korodhsi meelaha, shaqaaluhu waxay ku qalabeeysan yihiin naadiyada karaoke qolka maqalka iyo muuqaalka, qolka ping-pong, chess iyo qolka domino. Si kor loogu qaado tayada shaqaalaha kor loogu qaado wadajirka, shirkadu waxay qabanqaabisaa tababar xirfadeed joogto ah, aqoon farsamo, tartamada xirfadaha iyo waxqabadyo kale, shaqaalaha shirkada wargeyskooda todobaadlaha ah ee ku saabsan isbedelada ugu dambeeya ee warshadaha oo soo daabaca shaqadooda, iyo iwm.
Ganacsigu wuxuu kobciyay horumarka isdaba-joogga ah ee dhaqanka shirkadaha, waxaan ku tiirsannahay dadaalkeenna guud iyo taageeradaada, baakidhka Shanghai Purple Link Limited ayaa sii fiicnaan doona!